द्वारिकलाल चौधरी भन्छन् : ६ महिना लकडाउन भएपनि कुनै गरिबलाई भोको हुन दिन्नँ ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
द्वारिकलाल चौधरी भन्छन् : ६ महिना लकडाउन भएपनि कुनै गरिबलाई भोको हुन दिन्नँ !
सुनसरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले छ महिना लकडाउन भए पनि कुनै पनि ग*रिब इटहरीबासीलाई भो*कभोकै हुन नदिने प्र*तिबद्ध,ता जनाएका छन् ।
“म इटहरीको मेयरको हैसियतले भन्छु छ महिना सम्म लकडाउन भएपनि हामी खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सक्षम छौं कोही भो,कै म,र्नेवाला छैन,” उनले भने । न*गरवासीलाई भो,कभोकै हुन नदिन उपमहानगर आवश्यक राहत जुटाउन लागिपरेको मेयर चौ*धरीले बताए।
उद्यमी, व्यवसायी, बैंक, सहकारी लगायत नागरिक समूदायलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिएको मेयर चौधरीले बताउनुभयो । मेयर चौधरीका अनुसार इटहरीमा ४० हजार घर परिवारमध्ये १५ हजार सम्म घरपरिवार दैनिक ज्या*लादारी गरेर गु*जारा चलाउने छन् ।
उनीहरु दिनभर श्र*म गरेर त्यसबाट प्राप्त ज्या*ला वाट वेलुका छाक टा,र्ने गर्छन् । ती जनतालाई भो,कभोकै हुन नदिन उपमहानगरको आ*कस्मिक कार्यपालिका बैठकले सवै वडाहरुमा राहत वितरण गर्न थालिएको हो ।
अहिले सवै वडामा राहत वितरण जारी छ । वडामा समेत सर्वपक्षीय बैठक बसेर रा*हत वितरणलाई थप ब्यवस्थित गरिने भएको छ ।
Previous Breaking News:कोरोनाको नयाँ ३ जना संं*क्रमित फेला परे । हालसम्म ९ जना भए! ।
Next एक महिनामा म*हामारीको ‘ट’र्निङ पो’इन्ट’ आ’उने विज्ञको दा*बी ।